ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ကို ဒဏ်ရာရှိလျက်နဲ့ ထပ်မံ မကစားခိုင်းတော့ဘူးလို့ ဆိုးလ်ရှား ပြော | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
ေန႔စဥ္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ (နံနက္ပိုင္း)
ေန႔စဥ္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ (ညေနပိုင္း)
ေန႔စဥ္ ႐ုပ္/သံအစီအစဥ္ (ႏိုင္ငံတကာ)
စီးပြားေရးစကား၀ိုင္း (Business Talk)
ျမန္မာ မ်ိဳးဆက္သစ္ (Next Gen Myanmar)
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ႐ုပ္/သံ မွတ္တမ္းမ်ား
Home သတင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္း ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ကို ဒဏ်ရာရှိလျက်နဲ့ ထပ်မံ မကစားခိုင်းတော့ဘူးလို့ ဆိုးလ်ရှား ပြော
ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ကို ဒဏ်ရာရှိလျက်နဲ့ ထပ်မံ မကစားခိုင်းတော့ဘူးလို့ ဆိုးလ်ရှား ပြော
တိုက်စစ်မှူး ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ကို ဒဏ်ရာရှိနေလျက်နဲ့ လက်ရှိရာသီမှာ အသင်းပွဲစဉ်တွေအတွင်း ပါဝင်ကစားခွင့် ပြုတော့မှာ မဟုတ်ကြောင်း မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းနည်းပြ ဆိုးလ်ရှားက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ကစားတဲ့ ဝုဗ်နဲ့ အက်ဖ် ဖလားပွဲစဉ်မှာ ကျောဒဏ်ရာ ရသွားတဲ့အတွက် အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှူး ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ဟာ အနည်းဆုံး သီတင်းပတ် ခြောက်ပတ် နားရဖွယ်ရှိတယ်လို့ ဗြိတိန်အခြေစိုက် Daily Mail သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။
လကရြှိရာသီမှာ အသငြးအတှကြ ပှိုငပြှဲအရပရြပမြှာ ၁၉ ဂိုး သှငြးယူထားတဲ့ ရကရြြှဖို့ဒြ ဒဏရြာရသှားတာက မနခြကွစြတာ ယူနိုကတြကအြတှကြ ထိခိုကမြှု ဖှဈလာစခေဲ့ပါတယြ။
မနခြကွစြတာ ယူနိုကတြကြ နညြးပှက ရကရြြှဖို့ဒြ အနားယူဖို့ လိုအပသြလောကြ အနားယူခှင့ြ ပေးသှားမှာ ဖှဈပါကှောငြး၊ အငြျဂလနနြိုငငြံရဲ့ အကောငြးဆုံး ဆရာဝနအြဖှဲ့နဲ့ ကုသသှားမှာ ဖှဈတဲ့အတှကြ ရကရြြှဖို့ဒဟြာ ကှံ့ခိုငမြှု အပှည့အြဝ ပှနရြမှာ သခွောကှောငြး ပှောပါတယြ။
ရကျရျှဖို့ဒျကို ဒဏျရာရှိလကြျနဲ့ ထပျမံ မကစားခိုငျးတော့ဘူးလို့ ဆိုးလျရှား ပွော
လက်ရှိရာသီမှာ အသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ်မှာ ၁၉ ဂိုး သွင်းယူထားတဲ့ ရက်ရှ်ဖို့ဒ် ဒဏ်ရာရသွားတာက မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အတွက် ထိခိုက်မှု ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နည်းပြက ရက်ရှ်ဖို့ဒ် အနားယူဖို့ လိုအပ်သလောက် အနားယူခွင့် ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံး ဆရာဝန်အဖွဲ့နဲ့ ကုသသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ဟာ ကြံ့ခိုင်မှု အပြည့်အဝ ပြန်ရမှာ သေချာကြောင်း ပြောပါတယ်။
Previous articleလိင်ပြောင်းထားတဲ့ စစ်သားက တောင်ကိုရီးယား စစ်တပ်ကို တရားစွဲမယ်
Next articleသမ္မတကို လုပ်ကြံတဲ့ ဇာတ်ကောင်နေရာက ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း လီဗြောင်ဟွန်း ပြော
အိန္ဒိယမှာ ကျေးရွာကို ပြန်လာသူတွေ COVID-19 မကူးအောင် သစ်ပင်ပေါ် လင့်စင်ထိုးပြီး နေထိုင်
အမေရိကန်က အီတလီ၊ ပြင်သစ်နဲ့ စပိန်တို့ထံ ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေး အကူအညီ ပေးမယ်
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်မှု ၇၈၆,၀၀၀ ကျော်လာ
တရုတ်ပြည်မကြီးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ပြန်မြင့်လာ၊ ပြည်ပက ပြန်ရောက်လာသူများကြောင့် ဖြစ်
နယ်သာလန်မှာ COVID-19 ကြောင့် ပြတိုက်ပိတ်ထားစဉ် ဗန်ဂိုး ပန်းချီကား ခိုးယူခံရ
တားမြစ်ချက်ကို မလိုက်နာဘဲ ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပတဲ့ အမေရိကန် ဓမ္မဆရာ အဖမ်းခံရ
VOM အယ်ဒီတာချုပ်ကို AA နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းတာမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီး
ျပည္တြင္းသတင္း 31 March, 2020 0
သင်္ကြန်ကာလမှာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကို ဖူးမြော်ခွင့် ပိတ်ထားမယ်
ျပည္တြင္းသတင္း 31 March, 2020
ႏိုင္ငံတကာသတင္း 31 March, 2020
အရေးကြီး သတ်မှတ် ကုန်စည်တွေကို စျေးကစားရင် အရေးယူမယ်
● MCN TV NEWS သို့ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ No. (527-529), Second Floor, Myint Myat Kyaw Building, Lower Pazundaung Road, Pazundaung Township, Yangon. Postal Code 11171 , Phone +95936084960